သင်၏ PC တွင် WhatsApp ကိုထည့်သွင်းရန်လွယ်ကူသောလမ်းညွှန်
28 / 11 / 2021 ဖတ်ပြီးသားမိ 2
Whatsapp Messenger သည် ယနေ့ဈေးကွက်တွင် ရေပန်းအစားဆုံး instant messaging app ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ Facebook ဂေဟစနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Whatsapp သည် သုံးစွဲသူများအား အဖွဲ့လိုက် ဖန်တီးခြင်းနှင့် စကားပြောနိုင်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ မီဒီယာများ ပေးပို့ခြင်းနှင့် ပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက် အဆုံးမှအဆုံး စကားပြောဆိုမှုများကို ခံစားနိုင်ခြင်းတို့အပါအဝင် သုံးစွဲသူများအတွက် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ပေးဆောင်ပေးပါသည်။
Whatsapp သည်ရိုးရှင်းသောအခမဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးအက်ပလီကေးရှင်းအဖြစ်စတင်ခဲ့သည်၊ ၎င်းသည်မကြာမီလူကြိုက်များလာပြီးနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းများအတွင်းရှိသာမာန် messaging app ကိုအစားထိုးလိုက်သည်။ မကြာသေးမီက Whatsapp သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးဗဟိုပြုအင်္ဂါရပ်များကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Whatsapp အပါအ ၀ င်စီးပွားရေးအက်ပလီကေးရှင်းသည်ကုန်ပစ္စည်းကိုစမတ်ဖုန်းအားလုံးတွင်စွယ်စုံ သုံး၍ ရှိရမည်။ ယနေ့ Whatsapp သည်အများဆုံး downloaded messenger ဖြစ်ပြီး iOS, Android နှင့် PC များ၌အခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။
သင်သည် ဆက်သွယ်ရေးအမျိုးအစားအားလုံးအတွက် Whatsapp ကို အားကိုးနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပါက သင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်ရှိ အက်ပ်ကို အသုံးပြုရာတွင် ကောင်းစွာနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သင့်ဖုန်းသည် သင့်အိမ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းတွင် အားသွင်းနေနိုင်သောကြောင့် သို့မဟုတ် သင့်အိမ်တွင် ထားခဲ့ကာ ပြန်မရနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုး ရှိလာနိုင်သည်။ အခြားအချိန်များတွင် သင်သည် အခြားသော အနှောင့်အယှက်များကို ရှောင်ရှားရန် သင့်စမတ်ဖုန်းကို မဖွင့်ချင်တော့ပါ။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ၊ သင့်စမတ်ဖုန်းကို အမှန်တကယ်ကြည့်စရာမလိုဘဲ သင့်စကားပြောဆိုမှုတွေကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေဖို့အတွက် သင့် PC မှာ Whatsapp ကို စနစ်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သင့်အလုပ်ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီသင်ခန်းစာမှာ PC မှာ Whatsapp ကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာပြပေးပါမယ်။
ကျွန်ုပ်တို့စတင်အသုံးမပြုခင်သင့်လက်ကိုင်ဖုန်းတွင် Whatsapp ကိုဖွင့်ထားကြောင်းသေချာပါစေ။
အဆင့် 1။ သင်၏ PC / Laptop တွင်ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ပါ။
ဘတ် WhatsApp အကြောင်း သင်သိလိုသည်များ
အဆင့် 2. URL ဘားတွင်၊ https://web.whatsapp.com ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
အဆင့် 3. ၎င်းသည် Whatsapp ၏ ဝဘ်ဗားရှင်းကို ဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ထူးခြားသော URL ကုဒ်တစ်ခုကို သင်တွေ့ရပါမည်။
အဆင့် 4။ သင့်စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် Whatsapp အက်ပ်ကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် 5။ Whatsapp Settings ကိုဖွင့်ပါ။
အဆင့် 6. ဆက်တင်များဝင်းဒိုးတွင်၊ 'Whatsapp ဝဘ်' ရွေးချယ်မှုကိုနှိပ်ပါ။
အဆင့် 7. သင့်စမတ်ဖုန်းဖြင့် သင့် PC တွင်ပြသထားသော Whatsapp Web QR ကုဒ်ကို စကန်ဖတ်ပါ။
အချိန်တိုအတွင်းမှာသင်၏ WhatsApp ပရိုဖိုင်းကိုသင်၏ကွန်ပျူတာ / လက်တော့ပ်ပေါ်၌ပုံတူပွားထားသည်။
သင်၏ PC တွင်သင်၏ Whatsapp Messenger အကောင့်ကိုယခုအသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။ သင်၏စမတ်ဖုန်းကို အသုံးပြု၍ မရပါ၊ သင်၏အဆက်အသွယ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်လိုသည့်သင်၏ Whatsapp အကောင့်ကိုအသုံးပြုလိုသောအခါ၎င်းသည်အလွန်အသုံးဝင်သည်။
သင့်စက်တွင် Whatsapp မရှိလျှင်၎င်းကိုအောက်ဖော်ပြပါကာလမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်။
Android အတွက် Whatsapp - ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
iOS အတွက် Whatsapp - ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
PC အတွက် Whatsapp - ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
လွန်ခဲ့သော TikTok ဆိုတာ ဘာလဲ ?
နောက်တစ်ခု Telegram မှာ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဘယ်လို စနစ်တကျ ထားခဲ့မလဲ။